Semalt Expert On The Infection, Spyware Uye Malware Security Guide
Malware (izwi rinoreva chirongwa chinonyanyisa) nderekushandiswa kunotungamirirwa kupinda kana kukuvadza PC pakusabvumirana kwako - IC753QMM601 FANUC. Zvinyorwa zvinosanganisira zvipembenene, PC zvirwere, Trojan stallions, spyware, scareware uye iyo inongova chidimbu chechando. Inogona kuwanika pazvikwereti uye mharidzo kana yakavharwa mumapepa ekudzivirirwa.
Nzira yakanakisisa yekurega kurega kusvibiswa ndeyekudzivirira hukama hwakanaka hwehutachiona hwekuchengetedza purogiramu, ita zvinyorwa zvitsva zve spyware, rega kubva pakakonzera kushungurudza maibvumirano e-mail kana nzvimbo. Izvo zvingaita, con vanyori vanonyengera: panguva ino malware anenge achinyengedzwa sewe email kubva kune shamwari kana nzvimbo inobatsira. Zvechokwadi, kunyange kunyanya kuchenjerera kwevashandisi vewebhu vanogona kunge vane mavairasi nokukurumidza kana kuti gare gare.
Pamusana pekuti iwe unofunga, pane zvakawanda zvinodhura zvirongwa zvekupindira zvisingabhadharwi zvinowanikwa kuti zvikugone kuti uzviparadze. Igor Gamanenko, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt , anonyora zvishoma pasi.
Uri kutarisa, uye zvose zvisinganzwisisiki chiso chechokwadi chinotaridzika chinowanikwa uye chinocherechedza iwe pane nyaya pane PC yako, somuenzaniso, 'PC yako inogona kusvibiswa nemapurogiramu anokanganisa spyware. Kudzingwa nokukurumidza kunodiwa. Kuti uongorore, chengeta "Hongu." Iwe hauzivi kana chiri chaicho kana kwete, saka iwe unotora sei? Chenjerera, izvi zvinogona kunge zvichityisa.
Inotarisa zvidziro uye inounganidza dambudziko pamusoro pako, PC yako pamwe nekushanda kwako kwepasitori kunze kwekubvuma kwako-kune zvizhinji, kukurudzira zvinangwa. Iyo inogonawo kuunganidza deta kubva mundima yako yekodhesi uye kunyange mazwi ako ezvinyorwa.
Zvishandiso zvinonyadzisira zvinogona kuzvidzora uye kutyisa PC dzakasiyana.
NOMUNYORI ANTIVIRUS PROGRAM
Zvirongwa zvinotevera zvinoshandisa nguva dzose pasina kuona, kudzivirira PC yako kubva pakusvibiswa.
Kushandisa hurongwa hwehutachiona husina rusununguko hunotungamirirwa pamwe nepropyware, hutsinye ne rootkit uye hutete huno-kuchengeteka hunoenderana.
Kurwisana neKupera maitiro kubva kuGrisoft iyo inowanzochengetedza maPC kubva kune hutachiwana nekupa nyore nyore hutachiona hwemashoko inozivisa nekuchengeteka.
Kuchengetedzwa kweMicrosoft Security
Inopa hurumende kuchengetedzwa kwekombiyuta yako inodzivirira zvirwere, spyware, uye zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa.
Ita nzvimbo yakachengeteka paPC yako yewebhu yakachengeteka yakawanda nekushandisa pamwe nekushandira uku kusununguka. Ichi ndicho chimbo chinoshamisa chevashandi vanobudirira.
Kuchengetedzwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana
Kutanga na, ita kuti iwe uise purogiramu yakakurumidza kugadzirisa hurongwa hwako hwekushanda. Izvi zvinowanzoshandisa kuchengeteka nekuvandudzwa kwevimbiso kuti vabatsire kuchengetedza gadget yako. Zvakasvibiswa zvakashata? Gadzirisa.
Chikumbiro chinotevera chinongoronga hurongwa hwako hwemarware, unoshatisa chero upi noupi hunogona kuwanikwa.
Mari inoshandiswa pasina malware eradicator iyo inotorawo pfuti pa rootkits, minye, spyware, parasites, uye adware.
software yepamusoro inoremekedzwa uye inobudirira iyo inoona uye inodzinga scareware uye malware kubva pa PC yako.